Ubala njani ubungakanani bomfanekiso wedijithali | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Lola ifani | | Idizayini yeMifanekiso, ngokubanzi, Amaqhinga
Ukubala ubungakanani bomfanekiso wedijithali akunzima. Nangona kunjalo, zikhona amagama amaninzi ahambelana ngemifanekiso yedijithali kwaye ngamanye amaxesha kulula ukudida enye kwenye. Ngaphambi kokwazi ukubala ubungakanani, kubalulekile ukuba ucace malunga nezinye iikhonsepthi, ezinje ngomfanekiso wedijithali okanye Umahluko phakathi kobukhulu bedijithali okanye ubunzima kunye nobukhulu bomzimba. Kule posi siza kuphelisa onke amathandabuzo dibanisa Siza kukufundisa indlela yokubala ubungakanani bomfanekiso wedijithali Ungaphoswa yiyo!
1 Yintoni umfanekiso wedijithali
2 Iingcamango omele ucace xa uthetha ngemifanekiso yedijithali
2.1 Ubunzulu bombala
2.2 Imowudi yombala
2.3 Ubungakanani bomfanekiso wedijithali
3 Ubala njani ubungakanani bomfanekiso wedijithali
Yintoni umfanekiso wedijithali
A umfanekiso wedijithali yi ubume obunemilinganiselo emibini yomfanekiso ngokusebenzisa amasuntswana. Incinci yeyunithi encinci yolwazi, ihlala yenziwe ngee-zeros. Ngokucacileyo, umfanekiso wedijithali unjalo ezininzi kunye neeros (ulwazi) oludityanisiweyo lwenza umfanekiso.
Olu hlobo lwemifanekiso silubiza ngokuba yikhowudi yokubini imephu. Babizwa njalo, kuba ngokwenyani ziziphumo zokujoyina inani elikhulu lamanqaku okanye iipekseli. Ngapha koko, ukuba uya kwinkqubo yokuhlela, enjengeFotohop, kwaye wandise ifoto ngokwaneleyo, uya kuba nakho ukwahlula ezo pixels. I-pixel nganye yenziwe ngamabhithi.
Iingcamango omele ucace xa uthetha ngemifanekiso yedijithali
La ubunzulu bemibala ubhekisa kwi inani leebits ezifunekayo ukufaka ikhowudi kunye gcina ulwazi ngaye umbala yiphikseli nganye. Umzekelo, ukuba sisuntswana eli-1, yimibala emi-2 kuphela enokufakwa ikhowudi; kodwa ukuba ingama-24-bit, 16,7 yezigidi zemibala eyahlukeneyo inokugcinwa.
Imowudi yombala lelona xabiso liphezulu ledatha enemibala enokugcinwa. Umzekelo, kwimowudi yombala we-RGB, kungagcinwa imibala ezizigidi ezili-16 (ubuncinci be-24-bit color color), ngelixa sisebenza ngemowudi ye-monochrome, mibini kuphela imibala eya kugcinwa (1-bit bit color color).
Ubungakanani bomfanekiso wedijithali
Ubungakanani bomfanekiso wedijithali buchazwa njengemveliso ye-linani leepekseli ezinalo mfanekiso ububanzi ngenani leepekseli eziphakamileyo. Ubungakanani bomfanekiso wedijithali, okwaziwa ngokuba bubunzima bomfanekiso, uhlala ulinganiswa ngee-byte, MB, okanye i-KB kunye ukuba ungabhidaniswa nobukhulu obuphathekayo (ehlala ilinganiswa nge-cm). Umfanekiso ofanayo unokuprintwa ngobukhulu obahlukeneyo bomzimba, kanye njengemifanekiso enobunzima obahlukeneyo inokuprintwa kubukhulu obufanayo bomzimba. Yintoni emisela ubungakanani bedijithali yomfanekiso ngumgangatho wayo: ubungakanani bayo bukhulu, oko kukuthi, iipekseli ezininzi eziqulethwe, ziphakamisa umgangatho wayo. Ukuba sinomfanekiso owenziwe ngeepikseli ezimbalwa, umgangatho uyancitshiswa kwaye ezo pixels ziya kubonakala.
Umzekelo, ukuba ndishicilela imifanekiso emibini yedijithali enobukhulu obufanayo, enye eneepikseli ezininzi (umfanekiso 1) ibonakala ingcono ngokungaphezulu kunenye (umfanekiso 2).
La Umgangatho womfanekiso wedijithali ukwaziwa ngokuba sisisombululo. Ngokobuchwephesha, isisombululo kukuxinana kweepikseli, Oko kukuthi, inani leepekseli kwi-intshi enye (dpi).
Ngokusengqiqweni, Ngaphantsi kokuba umfanekiso unobunzima, iiphikseli ezimbalwa ziya kuwenza kwaye iipikseli ezimbalwa ziya kuba kwi-intshi nganye. Isisombululo sayo ke ngoko siya kuba sibi ngakumbi kunesomfanekiso onzima oprintwe kubukhulu obufanayo bomzimba.
Xa ugqiba ukuba yintoni sigqibo uya kuprinta, 200 ppi okanye 300 ppi, umzekelo, awutshintshi ubungakanani bedijithali yomfanekiso, into oyiguqulileyo bubungakanani bomzimba. Ukuba uprinta kwi-200 ppi uza kufumana ifoto enkulu enesisombululo esisezantsi. Ukuba usiphakamisa isisombululo ukuya kuma-300, ifoto iya kuba ncinci ngokwasemzimbeni, kuba ucela ukuba inani elikhulu lee-pixels ligxunyekwe kwi-intshi nganye, kwaye ukufezekisa oku ubukhulu bomzimba buncitshisiwe ubungakanani bedijithali buhlala buhleli.
Ukubala ubungakanani bomfanekiso wedijithali kwii-byte, kufuneka nje siphindaphinde inani leepekseli zizonke ongumnini womfanekiso (iipikseli eziphezulu zeepikseli ezi-x ububanzi) ngokobunzima bepikseli nganye.
Ukufumana ubunzima bepikseli nganye, kuya kufuneka uthathele ingqalelo imo yombala. Umzekelo, ukuba ngumfanekiso we-RGB, into esiya kuyenza kukwahlula ii-bits ezingama-24 ngo-8, kuba isuntswana eli-1 lilingana nee-byte ezisi-8. Ukuba ufuna ukwazi ubungakanani kwi-KB kufuneka wahlule iziphumo ngo-1024.
Nangona kunjalo, kwikhompyuter, ngokufikelela kwiipropathi zefayile, uya kufumana ngokulula ubungakanani befoto, Yintoni enzima ngakumbi kukwazi ukuba ubungakanani ubungakanani ekufuneka ubuprintile umfanekiso wedijithali ukuze isisombululo silungile, Ndikuzisa iqhinga oko kuya kusindisa ubomi bakho. Ungangena esi sixhobo sokubala sobungakanani kwi-intanethi ukulungiselela imisebenzi yakho yokuprinta kwaye uyidlale ikhuselekile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ubala njani ubungakanani bomfanekiso wedijithali